Manchester United kwesịrị iji isi ọ bụghị obi maka ọdịnihu Solskjær | 1xbet
Ọ bụghị ihe nzuzo na a họpụtara Solskjær nwa oge mana ọ bụrụ na onye njikwa nwa oge na -eme nke ọma, ọ kwesịrị ịgbaso mgbe niile ka a họpụta ya kpamkpam? N’ezie, Solskjær karịrị ka ekwesịrị ịtụle mana ekwenyere m na mkpebi nke bọọdụ ịhọpụta onye njikwa Manchester United na-esote enweghị ike ime ya dabere na mmetụta uche na agụụ na-adịte aka nke onye bụbu onye ọkpụkpọ na-akpọghachi ndị otu ahụ ” dị mma. oge ochie ”.Kama ọ dị mkpa ka bọọdụ ahụ mee mkpebi site na atụmatụ afọ atọ ruo ise n’uche ebe United nwere ike ịgba mgba maka Premier League na Champions League oge ọ bụla.
Maka m, ọ dị mkpa karịa ilele nnukwu Nsonaazụ ugbu a, bọọdụ kwesịrị ịjụ, “Solskjær ọ nwere ike iduga ndị otu iji merie Champions League n’ọdịnihu?” Echere m na ọ bụrụ na ị jụọ ọtụtụ ndị egwu United ajụjụ a ugbu a, ọtụtụ agaghị enwe mgbagwoju anya. N’iji ya tụnyere, ọ bụrụ na ị jụrụ otu ajụjụ echiche, ọ bụrụ na a họpụtara onye ga -eme ntuli aka dịka Zinedine Zidane n’ọrụ mbụ ya mgbe ọ nwetasịrị iko Champions League ugboro atọ na Real Madrid, a ga -enwe nkwenye karịa n’etiti ndị na -akwado United.
Okwu niile Solskjær kwuru ugbu a bụ maka iweghachite ụbọchị ọma na Old Trafford.Ọ bụ ihe ihunanya na enweghị agụụ mana nke a nwere ike ime ka ndị isi United ghara ime mkpebi n’ile anya n’ihu kama ileghachi anya azụ. N’ọtụtụ egwuregwu, igwe onyonyo TV na -agbada na Sir Alex Ferguson kwa nkeji ole na ole, maka m, nke a na -anọchite anya ileba anya n’oge gara aga karịa ọdịnihu. ihe ịga nke ọma na klọb. Ruo n’ókè a ekwenyere m n’ihe Gary Neville kwuru n’izu a na nkà ihe ọmụma na United dị mkpa mana ekwetaghị m na ọ dịghị onye kwesịrị ikwe ka ọ mepụta ụdị nke ya. Mma nke ịgba bọọlụ bụ na enwere ọtụtụ ụzọ iji merie, yabụ inye Solskjær ọrụ na ndabere nke imepụtaghachi ihe emere nke ọma n’oge gara aga nwere ike igbochi mmalite nke United nwere ike ịchọ.Facebook Twitter Pinterest Zinedine Zidane soro Real Madrid merie Champions League afọ atọ n’usoro. Foto: Genya Savilov/AFP/Getty Images
Enweela ụfọdụ akụkọ na Ferguson alaghachila n’ala ọzụzụ n’izu a ma ọ gaghị eju m anya ma ọ bụrụ n’ezie na ọ nwere mmetụta n’ịhọrọ ndị otu.Ọ lara ezumike nká afọ isii gara aga, kedu oge klọb ahụ ga -aga n’ihu wee sị: “Anyị kwesịrị ịmepụta akụkọ ọhụrụ?” Aghọtara m ihe kpatara Solskjær ji enwe oke agụụ n’ihi na ihe ghọrọ ihe na-egbu egbu n’okpuru José Mourinho na ọ dịkwa ike n’okpuru David Moyes na Louis van Gaal mana echere m na atụmatụ ogologo oge dabere na nostalgia bụ uzommeputa maka ndakpọ olileanya. </pp
Ikekwe mmetụta amamihe dị ka nke dị na Chelsea bụ nke “Ọ bụrụ na ọ gbajighị, gbanwee ya” nke hụrụ ka anyị meriri iko atọ n’ime afọ ise na -egwu usoro atọ dị iche iche na atụmatụ ụzọ ka ndị mmegide enweghị ike ijigide mmalite anyị n’oge ahụ. ‘Anọ m na ndò’: Paul Pogba kwuru na Solskjær eweghachila ọchị ya Gụkwuo
Solskjær bụ onye njikwa na -enweghị uche nke ghọrọ onye mbụ meriri egwuregwu isii mbụ ya na Manchester United.Ọ bụ mmezu dị ịtụnanya. Agbanyeghị, nke ahụ ezuru iji nye ya otu nnukwu ọrụ n’ụwa n’oge klọb kwesịrị ime “isi” karịa mkpebi “obi”? Mgbe gị na mmadụ na -eme enyi izu ole na ole, ị naghị abụkarị onye pụrụ iche ruo mgbe ị nyere onwe gị oge iji mara ihe mmekọrịta nwere ike ịdị n’ọdịnihu. Ị nweghị ike inwe oke ọ joyụ ngwa ngwa.
Zidane na -abata ozugbo ozugbo dị ka ihe ọzọ n’ihi na ọ nwere ahụmịhe nke ijikwa klọb zuru ụwa ọnụ, ebe ọ batara na sistemụ na Real Madrid na -azụ ndị na -eto eto. /p>
Zidane ga -enwerịrị ikike ijikwa otu egwuregwu mbụ na ndị egwuregwu dịka Cristiano Ronaldo kwanyere ya ugwu.Ị nweghị ike leda ihe ịga nke ọma Zidane meriri Champions League ugboro atọ n’ahịrị – ọ ga -abụrịrị na ọ marala nka nke ọma iji kpalie ụdị mmasị Ronaldo, Luka Modric, Gareth Bale, Karim Benzema et al iji nwee agụụ ịbụ ndị mmeri Champions League.
Apụghị m ịhụ na mmezu ahụ na -eme ọzọ yabụ ekwesịrị ịtụle Zidane dị ka otu n’ime ndị njikwa kachasị n’oge a. Naanị ajụjụ bụ ma Zidane ga -achọ n’ezie ọrụ United. Anyị ga -ahụ ma o nweela ọchịchọ ịlaghachi na nchịkwa n’oge a. Fiver: debanye aha wee nweta email bọọlụ anyị kwa ụbọchị.
N’ihe dị mma, ọ na -aga igosi ọ dị mkpa na Solskjær nyere ndị egwuregwu Manchester United ohere ikwupụta uche ha.Paul Pogba na Marcus Rashford na -eme nke ọma n’ihi na enyere ha ikike igosipụta ikike ha. Aghọtara m otu isi ihe a nwere ike isi bụrụ ịrụ ọrụ. Ka ọ na -erule ngwụcha afọ gara aga, ewetaghị m akara maka egwuregwu ole na ole nke mere ka m chee echiche, nke na -adịghị mma maka ndị ọkpọ. Onye nkuzi m, Rita Guarino, bịakwutere m wee sị: ‘Onye – echela nke ukwuu. Naanị gwuo egwu dị ka ịnọ n’ogige ntụrụndụ. ‘Ọ nwere ike ịdị obere ka ọ dị obere mana m hapụrụ echiche niile na -enweghị isi nke dị n’ụzọ m na -apụ ma jiri nnwere onwe na -egwu egwu. Emechara m tụọ aghụghọ nke abụọ m maka Juventus na egwuregwu ahụ ma ọ dị ịtụnanya etu mkpụrụ okwu ole na ole ahụ siri nyere aka. Enwere m ike iche otu mmetụta ahụ metụtara Rashford na Solskjær.
Ọ ga -abụ ihe na -atọ ụtọ n’ezie ịhụ ihe na -eme na United n’ime ọnwa ole na ole sochirinụ.A sị ka e kwuwe, Roberto Di Matteo mechara bụrụ onye meriri Champions League maka Chelsea mgbe ọ weghaara dị ka onye njikwa nwa oge, kedu ihe ga -abụ Solskjær ugbu a? Ọ bụrụ na ọ meriri iko wee banye ManchesterUnited n’ime anọ kachasị elu, ọ kwesịrị ọrụ ahụ oge niile?